ကမ္ဘာပေါ်က ကံအကောင်းဆုံးယောကျာ်းကို လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး…. - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / နိုင်​ငံတကာသတင်း / ကမ္ဘာပေါ်က ကံအကောင်းဆုံးယောကျာ်းကို လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး….
ကမ္ဘာပေါ်က ကံအကောင်းဆုံးယောကျာ်းကို လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး….
Apann Pyay 8:03 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ , နိုင်​ငံတကာသတင်း Edit
အချစ် ဆိုတာကို လူတိုင်းက အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ အချစ် စစ်မှာ သီးခြားအဓိပ္ပါယ်မရှိသလို တကယ်ချစ်မိပြီဆို အဲလူတစ်ယောက်ကို ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ လက်ခံရမှာ သင့်တာဝန်ပါပဲ။
အင်ဒိုနီးရှားက ဒီအမျိုးသားဟာ သူ့ဇနီးနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ တင်ခဲ့ပြီးနောက် သူ့ကိုမနာလို ဝေဖန်တဲ့သူတွေ အတော်များပြားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဇနီးဖြစ်သူက ဗြိတိန်နိုင်ငံသူ အချောအလှလေးဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။
Jennifer Brocklehurst လို့အမည်ရတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသူလေးဟာ အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းဆွယ်ကို လာရောက်လည်ပတ်ရင်းသူနဲ့မသိတဲ့ ဒေသခံဖြစ်တဲ့BayuKumbaraနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဆုံပြီးနောက် သူတို့နှစ်ဦးဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခင်စုံမက်ခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံးမှာ လက်ထပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဟာ Bayuကို မနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ကျွန်းပေါ်နေထိုင်သူတွေကတော့ Bayuကို ကမ္ဘာ့ကံအကောင်းဆုံးလူသားလို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိန်သူလေး မခွဲနိုင်ဖြစ်ရတဲ့ Bayuမှာ ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုမျိုးတွေ ရှိလို့ပါလိမ့်။